भा’गर’थीलाई मा’र्नकै लागि कु’रेर बसेको थिए, सुरुमा मैले उनको कि’ताब फा’लेँ, त्यसपछि उनलाई पछाडिबाट… ! – eSidhakura
मुख्य पृष्ठसमाचारभा’गर’थीलाई मा’र्नकै लागि कु’रेर बसेको थिए, सुरुमा मैले उनको कि’ताब फा’लेँ, त्यसपछि उनलाई पछाडिबाट… !
भा’गर’थीलाई मा’र्नकै लागि कु’रेर बसेको थिए, सुरुमा मैले उनको कि’ताब फा’लेँ, त्यसपछि उनलाई पछाडिबाट… !
काठमाडौं । बै’तडीको दो’गडाकेदार गा’उँपालिका–७ की १७ वर्षीया भा’गर’थी भ’ट्टको ब’ला’त्का’र’पछि ह’त्या आ’रोपमा पक्राउ प’रेका दिनेश भट्ट घ’टनाको दिन डेढघण्टा पहिल्यै बाटोमा कु’रेर ब’सेको खु’लेको छ ।प्रहरी अनुसन्धानका क्र’ममा उनी विद्यालयबाट डे’ढघण्टा पहिल्यै नि’स्किएका थिए । भा’गर’थी कक्षा १२ मा प’ढ्थिन् भने दिनेश कक्षा ११ मा । उनीहरुबीच दि’दीभाइको ना’तासमेत पर्छ । दिनेशको विद्यालय छु’ट्टी समय ३ बजेर १५ मिनेटमा हु’न्थ्यो भने भा’गर’थीको २ बजेर ३० मिनेटमा ।
तर माघ २१ गते दिनेश २ कक्षा छा’डेर ह’त्या ग’र्नकै लागि बाटोमा कु’रेर ब’सेको प्रहरीको प्रा’रम्भिक अनुसन्धानले दे’खाएको छ ।सुरुमा दिनेशले आफू स्कु’ल बि’दा भएपछि मात्रै घर ग’एको ब’ताए पनि पछि भने छि’टो नि’स्किएको स्वी’कार ग’रेको प्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन् ।स्था’नीय स’नातन ध’र्म माध्यमिक विद्यालयको कक्षा–१२ मा अध्ययनरत् भा’गर’थी माघ २१ गते साँझसम्म वि’द्यालयबाट घर न’फर्केपछि खो’जी सु’रू भएको थियो ।उनी २२ गते बिहान क’च्ची सडकभन्दा ५० मिटर भित्री क्षेत्रमा मृ’त अवस्थामा फे’ला प’रेकी थिइन् ।
मे’डिकल रि’पोर्टमा भने उनको ब’ला’त्का’र’पछि ह’त्या भएको प्रहरीले ब’ताउँदै आएको छ । तर ह’त्या स्वी’कार ग’रेका दिनेशले आफूले ब’ला’त्का’र न’गरेको ब’यान दि’एको स्रोत बताउँछ । घटना २१ गते दिउँसो २ः४० देखि २ बजेर ४७ मिनेटको बीचमा भएको बताइएको छ । अनुसन्धानकै क्रममा प्रहरीले दिनेशलाई पक्राउ ग’रेको हो । उनलाई अ’भियुक्तको रुपमा सार्वजनिक गर्ने प्रहरी तयारी छ । प’क्राउपछि दिनेशको भ’नाइलाई उद्धृत गर्दै प्रहरी स्रोतले भन्यो,“म बाटोमा प’हिल्यै ब’सेको थिएँ ।भा’गरथी दि’दी चाउचाउ खाँदै आ’उँदै थिइन् ।
सुरुमा मैले उनको कि’ताब फा’लेँ । त्यसपछि उनलाई पनि पछाडिबाट ध’क्का दिएँ । उनी ल’डेर बे’होस भइन् अनि घाँ’टी थि’चेर मा’रेँ ।”उनले आफूले फु’पुको ब’दला लिन ह’त्या ग’रेको बताएको प्रहरी स्रोत ब’ताउँछ । आफूले पहिल्यै मा’र्न चाहेको भए पनि न’मिलेको उनले प्रहरीसमक्ष ब’यान दि’एको स्रोत बताउँछ ।उनले भा’गर’थीलाई ल’डाएर बे’होस बनाएपछि ब’लात्कार ग’र्न खो’जेको भने ब’यानमा स्वी’कार गरेको प्रहरी स्रोतले जानकारी दियो । ब’ला’त्का’र’को प्रयास गरे’को तर न’गरेको ब’यान दि’एको प्रहरीले स्रोतले जानकारी दियो ।
ह’त्यापछि आ’फैँले भा’गर’थीको मोबाइलको ब्’याट्री झि’केर फा’लेको दिनेशले बताएका छन् । त्यसपछि उनी नि’यमितरुपमा विद्यालय समेत ग’इरहेका थिए ।भा’गर’थी ह’त्या अनुसन्धानमा के’न्द्रीय अनुसन्धान ब्यु’रो, प्रदेश प्रहरी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीको वि’शेष टो’ली ख’टिएको थियो ।